Kedu ihe bụ ọgwụ, kedu ka esi hiwe ya na gịnị bụ nsonazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ihe gbasara ihu igwe, Ajọ Ifufe
Mgbanwe ihu igwe na-akpata mmụba ma ihe omume na ugboro ole nke ihu igwe dị iche iche. Nke a pụtara na ihe dị iche iche dị ka oke ifufe na ifufe ga-eme na oge dị ukwuu, nke ga-ebute ọdachi, ụkọ mmiri ogologo na idei mmiri nwere mmetụta ka ukwuu. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe a ọgwụ na ebe a na-akpụ ya. Ọ bụ ajọ ifufe nke na-akpụ n’Oké Osimiri Mediterenian ma na-achọ Gris.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ọgwụ na-enye na mmetụta ọ ga-enwe.
1 Gini bu ogwu
2 Ọtụtụ oge ihe dị egwu ihu igwe
3 Ọnọdụ ọzụzụ Medicane
4 Kedu otu esi eme ajọ ifufe
Gini bu ogwu
Okwu a bụ medicane sitere na ajọ ifufe Bekee dị na Mediterranean. Ọ pụtara ajọ ifufe nke Mediterranean. Otú ọ dị, ọ bụghị ajọ ifufe n'onwe ya, ma ọ ka nwere ike inwe mmetụta yiri ya. Oge mgbụsị akwụkwọ bụ ezigbo oge nhazi ha ebe ọ bụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma ka nke a mee.
Gris bu ihe ogwu ogwu ma na akwadobe inweta ikike nke oke ikuku nke gha enweta ego na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Ionian. Emere oke ikuku a site na aha Ianos ma ihe e ji mara ya bụ site na ịnwe ifufe na oke mmiri ozuzo nke nwere ike ibute nguzo nke idei mmiri. Ọsọ ikuku nwere ike ibute ọpụpụ ike n’ebe ụfọdụ ikuku kacha ike. Usfọdụ guss of wind nke siri ike ma na-atụ anya ya ha ga-enwe ọsọ ọsọ nke 200 km / h. Banyere mmiri ozuzo, ọnụọgụ dị n'etiti lita 200 na 400 kwa mita mita na-atụ anya n'ime awa ole na ole.
Dị ka ọ dị, ndị kacha dịrị nso na osimiri na iyi kwesịrị ịchọ ebe ọzọ maka ebe obibi iji zere nhụjuanya nke idei mmiri nwere ike ime. N'aka nke ọzọ, ụmụ amaala ndị ọzọ kwesiri ịgbapụ njem na-enweghị isi iji zere ibute nnukwu ihe ọghọm. A na-ewere ọgwụ ọgwụ Ianos dị ka oke ifufe nke ebe okpomọkụ ma dịkwa ka ajọ ifufe. Agbanyeghị, ọ nwere ike, ndọtị na ogologo oge yiri nke ajọ ifufe. Ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta sayensị na-anwa ịkọ ókè ọ ga-ekwe omume mmetụta ike ọ ga-enwe, a pụghị ịkọwa usoro usoro a ga-eji usoro zuru oke.
Ọtụtụ oge ihe dị egwu ihu igwe
Dịka anyị kwurula ọtụtụ isiokwu, oge na ike nke ihe ịtụnanya na-agaghị echekarị. n'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Maka ajọ ifufe ịmalite, achọrọ mmiri ebe okpomọkụ ka mmiri wee mepụta ga-adị oke elu ma pụta na ebupute oke ikuku ndị a n'igwe ojii. Ọnọdụ okpomọkụ dị na Oke Osimiri Mediterenian bụ n'ihi okpomoku ụwa. Ọganihu a na ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-ebute ọdịiche na usoro ihu igwe. Nke a bụ etu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihu igwe ga-esi mepụta ma sie ike karịa ka anyị siri eme.
Ọ bụghị nke mbụ a na-enweta ọgwụ n’ebe a. N’afọ 1995, ajọ ifufe ndị a pụtara na nke mbụ ya na Gris. Agbanyeghị, amaara na n'ihi mgbanwe mgbanwe ihu igwe ihe ndị a na-emewanyewanye n'oge na-adịbeghị anya. Oké ifufe ọzọ yiri nke a dakwasịrị Gris na 2018. A hụrụ oke ide mmiri ebe a, gbuo mmadụ 25 ma mee ka ọtụtụ narị mmadụ ghara inwe ebe obibi. A na-akpọ oké mmiri ozuzo ahụ ọgwụ n'ihi na ọ dị mkpụmkpụ maka ajọ ifufe Mediterranean.
A na-atụ anya Ianos na ebili mmiri abụọ. Nke mbụ na-abụkarị ike ebe a, ọ na-abịa na-ebu ibu na iru mmiri. Nke abụọ ga-adị ka mgbe ala ọma jijiji gachara. Obodo asaa dị na ọdịda anyanwụ Gris bụ ndị etinyelarị na nche tupu oke ebili mmiri ahụ. Ọ bụ ndị ọchịchị na-ekpebi ma emeghị ka obodo Atens, Attica na Kọrịnt saa mbara mata.
Ọnọdụ ọzụzụ Medicane
Maka otu ụdị ajọ ikuku ikuku na-etolite, oke osimiri dị jụụ nke nwere obere shea na gburugburu ebe dịkarịsịrị mkpa. Anyị maara na Oke Osimiri Mediterenian, nyere ohere ya na gburugburu ala ya, abụghị oke osimiri nke na-ezute ọnọdụ maka nguzobe ụdị usoro ihu igwe a. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọnọdụ ụfọdụ emee, ọkachasị n'oge a n'afọ, enwere ike inye ọnọdụ ndị a dị mkpa maka mmepe nke okpuru mmiri subtropical. Azụ mmiri ndị a bụ ụdị ngwakọ dị n'etiti etiti na-ekpo ọkụ na nke na-abụghị nke okpuru mmiri.
N'ihe banyere Ianos enwere ike n'akpa uwe ikuku oyi di elu. Dika odi okwu di ala, enwere ike iji onodu ndi a malite usoro ntughari. Site na usoro mmegharị, ebumnuche nke ikuku mmiri na - eme nke na - enweta njirimara nke oke ikuku nke ebe okpomọkụ. Anyị kwuru na mbụ, Ọ bụghị oge mbụ ụdị ikuku a nke ụdị a malitere na mpaghara a. A na-emepụta ha na nkezi nke 1 ma ọ bụ 2 kwa afọ ma na-akpọkarị medicanes.
Nyere ike na ọnọdụ ọzụzụ nke Ianos, nke a ga-abụ ọgwụgwọ pụrụ iche.
Kedu otu esi eme ajọ ifufe
Ka ajọ ifufe mepụta, a ga-enwerịrị oke ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ (ikuku ikuku ebe okpomọkụ nwere njirimara ndị a). Ikuku a na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na-eji hurricane eme ihe dị ka mmanụ ụgbọala, site n'ebe ahụ gaa na ha kpụrụ, na-ejikarị, nso Equator.
Ikuku na-esi n’elu mmiri agbapụta, na-ahapụ ebe kasị ala n’enweghị ikuku dị ala. Nke a na - emepụta mpaghara nke ikuku ikuku dị nso na oke osimiri, ebe ọ bụ na ikuku pere mpe kwa nkeji.
Na ikuku zuru ụwa ọnụ nke ikuku gburugburu ụwa, igwe ikuku na-esi ebe ikuku ọzọ na-aga ebe na-erughị, ya bụ, site na mpaghara nke nnukwu nrụgide na nrụgide dị ala. Mgbe ikuku gburugburu ebe a hapụrụ na nsogbu dị ala na-akwali iji mejupụta "oghere" ahụ, ọ na-ekpo ọkụ ma na-ebili. Ka ikuku na-ekpo ọkụ na-aga n’ihu ịrị elu, ikuku gbara ya gburugburu na-agba gburugburu iji were ọnọdụ ya. Mgbe ikuku nke na-ebili jụrụ, ọ na-abụ igwe ojii. Ka usoro a na-aga, igwe ojii niile na ikuku ikuku na-agbaghari ma na-eto, nke okpomoku oku na-eme na mmiri nke na-amịkọrọ elu ala.
Ọnọdụ ndị a niile metụtara gburugburu ebe obibi na-eweta ihe na-akpata okpomoku ihu igwe nke ụwa.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe ọgwụ bụ na ihe mmetụta ya bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọgwụ